दशैँ तिहारमा के खाने के नखाने ? यस्ता रोग लागेकाले कस्ता खाना खाने ? - Khabar Break
काठमाडौं – हिन्दुहरुको महान चाड दशैँ तिहारको माहोल शुरु भइसकेको छ । दशैँ तिहारमा नेपालीहरुको भान्सामा दैनिक विभिन्न मिठा परिकारका खानेकुराहरु पाकिरहेका हुन्छन् । यस बेला धेरैले चिल्लो र मसलाहरु मिसाएर बनाइएका परिकार बनाएर खाँदा स्वास्थ्यमा समस्याहरु पनि आउन सक्छ । खानपानमा ध्यान नदिदा मानिसहरुलाई विभिन्न रोगहरु लाग्ने तथा दीर्घरोगहरु भएकाहरुलाई झन समस्या हुन सक्छ । त्यसैले खानेकुराहरु ख्याल गरेर खानुपर्दछ । खानपानमा विशेष ध्यान दिइयो भने शरीरमा लाग्ने विभिन्न रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ । साथै रोग लागिसकेपछि पनि खानपानमा नियन्त्रण गर्न सकिएमा हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ ।
– अहिले धेरैलाई ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ । धेरै नेपाली ग्यािस्ट्रकबाट पीडित छन् । लामो समयसम्म खालि पेट बस्दा यो समस्याले ठुलो रुप लिन सक्छ । खालि पेट बसेर लामो समयपछि चिल्लो, पिरो, मसालेदार खाने कुरा खाए पेट दुख्न सक्छ । त्यसैले समय–समयमा पानी पिउनुका साथै फलफूल पनि खाइरहनुपर्छ । ग्यास्ट्रिकका बिरामीले बोसोयुक्त रातो मासु खानु हानिकारक हुन्छ । रातो मासुको साटो कुखुरा तथा माछा खान सकिन्छ ।
– यस्तै अन्य खानेकुराको तुलनामा मासु खाँदा कब्जियतको पनि समस्या हुने गर्छ । यस्तो समस्या हुनबाट बच्न मासु–भातका साथमा हरियो सागपात, सलाद, खोस्टे मुंगको दाल एवं फलफूल आदि खानेकुरा खानुपर्छ । यस्तै पानी पनि प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ ।
– यस्तै अहिले धेरै मानिसहरु मधुमेह रोगी छन् । दशैको बेलामा यस्ता रोगीहरुले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता रोगीले गुलियो नहालेको खानेकुरा समय–समयमा खाइरहनु पर्छ । नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्छ । खाली पेटमा धेरै पिरो–अमिलो खानु हुँदैन । मधुमेहका बिरामीका लागि रातो भन्दा पनि सेतो मासु तथा माछा उपयुक्त मानिन्छ । सीमित क्यालोरीयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । कतिपयले मासुसँगै ड्रिंक्स पनि गर्छन् ।
– यस्तै मिर्गौलाका बिरामीले रातो मासु, प्रोटिन तथा पोटासियमयुक्त खाना कम मात्रामा खानुपर्छ । पोटासियम बढे मुटुमा असजिलो हुन्छ भने सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता बिरामीले गेडागुडी तथा कुरिलो पनि खानुहुँदैन । कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोलका बिरामीले रातो मासु, कलेजो तथा फोक्सो खानु हुँदैन । गेडागुडी, कुखुराको मासु तथा माछा नतारी थोरै तेलमा बेक गरेर खानु वेश हुन्छ । हरिया तरकारी तथा सागपात प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ ।
– यस्तै युरिक एसिड भएका बिरामीहरुले सकेसम्म रातो मासु खानु हुँदैन । यसमा रहने प्युरिन कन्टेन्टले युरिक एसिड बढाउँने गर्छ । यस्तो समस्या हुनेहरुले दाल तथा गेडागुडी पनि सीमित मात्रामा खानुपर्छ । उच्च प्रोटिनका कारण युरिक एसिड बढ्छ परिणामस्वरूप गोली गाँठा सुन्निन्छ । युरिक एसिड भएकाहरूले माछा खानुपर्छ भने पानी पनि प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ ।
– यस्तै मोटोपन भएकाले नियमित व्यायाम नगर्ने, धेरै गाडी चढ्ने गर्नुहुँदैन । खाने–बस्ने काम मात्र गर्दा व्यायामको कमी हुन्छ । मोटोपन भएकाहरूले तारेको भन्दा पनि उसिनेको मासु खानु उपयुक्त हुन्छ । मासु मात्र धेरै नखाई सागपात पनि उत्तिकै खानुपर्छ ।
– यस्तै मुटु रोगीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिई चिल्लो तथा पिरो खानेकुरा बढी खाए उच्च रक्तचाप हुनुका साथै स्ट्रोकसमेत हुनसक्छ । मुटुको नसा साँघुरिएका बिरामीले रातो मासु खानुहुँदैन । धेरै क्यालोरीयुक्त, चिल्ला, पिरा, अमिला खानेकुरा खानुहुँदैन । यस्ता रोगीले कुखुरा तथा माछा ग्रिल गरेर खानु राम्रो हुन्छ ।
– यस्तै रक्तअल्पता भएकाहरुले पनि खानेकुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । रक्तअल्पताबाट बच्न प्रशस्त आइरनपाइने कलेजो खानु उपयुक्त हुन्छ । यस्तै फलामको भाँडामा पकाइएको खानेकुरा तथा कालो दाल खाँनु राम्रो हुन्छ ।
from : canadanepal
मासु काटेपछि कसरी सुरक्षित राख्ने ?
हेटौंडा अस्पतालमा ६ सय ४७ जनाले गराए निःशुल्क मुटु परीक्षण
सावधान ! यस्ता छन दाँत बिगार्ने १५ बानी
हेटौंडा अस्पतालमा नि:शुल्क मुटुरोग शिविर संचालन हुदै
मकवानपुरको विद्यालयहरुमा यौन शिक्षा दिदै स्वास्थ्य कार्यालय
बालबालिकामा घातक बन्दै सेतो पुतली, ४८ घण्टाभित्र उपचार नथाले आँखाको ज्योति नै गुम्ने खतरा !